नुहाउदा पिसाब फेर्नुहुन्छ? के हुन्छ फेर्दा ? - ramechhapkhabar.com
नुहाउदा पिसाब फेर्नुहुन्छ? के हुन्छ फेर्दा ?
नुहाउँदा पिसाब छाड्नुहुन्छ? अवस्य पढ्नुहोस यो जानकारी मानिसको आ-आफ्नै आनीबानी बारे कुरा गर्ने हो भने सबै मानिसको कुन व्यवहार स्विकार्य र कुन कुरा अस्विकार्य भन्ने आ–आफ्नै धारणा हुन्छ तर एक अज्ञात व्यक्तिले बाथरुममा गरेकाे बानी बारे एउटा सामान्य प्रश्न मात्र उठाइदिँदा पनि ठूलो र गरमागरम विवादh तानिएकाे छ ।